सर्लाहीको हरिऔँनमा एउटा बाख्रिले जन्मायो एकैचोटि ६ वटा बच्चा !! – Dhukdhuki fm
मनोज यादव । सर्लाही ,२३ पुस – सर्लाहीको हरिवनमा एउटी बाख्रीले एकै बेंतमा ६ वटा पठापाठी ब्याएको छ। हरिवन नगरपालिका -१ निवासी गोबिन्द बिष्टले आफ्नो गोठमा पालेको लोकल बाख्रीले ६ वटा बच्चा ब्याएको हो ।
बाख्रीलाई ब्यथाले च्यापे पछि र सहज तरिकाले बच्चा ब्याउन मुस्किल परे पछि कृषक बिष्टले पशुप्राविधिक रामचन्द्र कुशवाहालाइ बोलाएर सुत्केरी गराउनुपरेको थियो । पशुप्रविधिक कुशवाहाले हात पसाएर पालैपालो गरि बाख्रीको पेटबाट सकुशल बच्चा झिकेको जिल्ला पशु विकास कार्यालय सर्लाहीका पशु विकास अधिकृत डा. सुनिल कुमार यादवले जानकारी दिनुभएको छ ।
बाख्रीको ६ वटै बच्चाहरु स्वस्थ्य र सकुशल रहेको डा. यादवले बताउनुभएको छ । किसान बिष्टको गोठमा बाख्रीले जन्माएको बच्चाहरु हेर्न र भेटनरी सम्बन्धि तालिम लिइरहेका बिध्यार्थीहरु सोध गर्न दिनहुँ आइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ ।